Wararka - Midabada infrared-ka u dhow
Midabka midabkiisu sarreeyo ee Uv
NIR nuugaya dheeh
Dheeh Cas Sare ah
Up beddelaya midabka
Midab sawir qaade ah
Ku dhowaad dheehyada infrared
Dheehannada infrared-ka u dhow waxay muujinayaan nuugista nalka agagaarka infrared-ka u dhow 700-2000 nm. Nuugiddooda daran waxay caadi ahaan ka soo bilaabataa wareejinta lacag ee dheeh dabiici ah ama isku-dhafan bir ah.
Waxyaabaha u dhow nuugista infrared-ka waxaa ka mid ah midabbada cyanine-ka oo leh polymethine dheereeya, dheehyada phthalocyanine oo leh xarun bir ah oo aluminium ah ama zinc ah, midabbada naphthalocyanine, iskuxirayaasha nikkel dithiolene oo leh joomatari laba jibbaaran, dheecaano squarylium, quinone analogues, xeryahooda diimonium iyo azo derivatives.
Araajida la adeegsanayo dheehannada noolaha ah waxaa ka mid ah calaamadaha amniga, lithography, warbaahinta wax lagu duubo ee indhaha iyo miirayaasha indhaha. Nidaamka lagu saleeyo laser-ka wuxuu ubaahanyahay agabyada infrared kudhow oo leh nuugitaan xasaasi ah oo in kabadan 700 nm, milmi sare oo dareeraha kuhaboon ee kuhaboon, iyo heerkul-adkaysi wanaagsan.
In si loo kordhiyo waxtarka beddelidda awoodda unugyada qorraxda ee dabiiciga ah, hufnaan u dhow midabbada infrared ayaa loo baahan yahay, maxaa yeelay iftiinka qoraxda waxaa ku jira nalka infrared-ka u dhow.
Intaa waxaa sii dheer, agabyada u dhow infrared waxaa la filayaa inay noqdaan biomaterials loogu talagalay kiimoteraabiga iyo sawir-qaadista unug-qoto-dheer in-vivo iyadoo la adeegsanayo ifafaalaha iftiinka leh ee u dhow gobolka infrared.
Qingdao Topwell Qalabka Kiimikada Co., Ltd.